Enif TV: Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | RoidHub
blog Entertainment Homepage
»Enif TV: Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Enif TV: Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Riwaayaddu waa nooc ka mid ah farshaxanka muuqaalka sawirku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna muhiimsan ee madadaalada loogu talagalay dhagaystayaasha waaweyn ee adduunka. Waxaan ka hadlaynaa Enif TV waana wax laxiriira qaabkan madadaalada.
Dhageystayaasha Koonfurta Aasiya waxay awood u leeyihiin inay ku shaqeeyaan opera saabuunta waana sababtaas ka dib aflaanta filimka, ay u yihiin riwaayadaha TV-ga iyo serials-ka oo ah kuwa ugu badan ee laga helo ilaha madadaalada.
Tani waa sababta warshadaha sii kordhaya ee madadaalada yar-yar ee muraayada yar ee gobolka oo dhan udhacayaan taxane ku saabsan bulshada, dhaqanka, iyo mowduucyo kale duwan.
Isla mar ahaantaana, xilligan adduun-weynaha. Waxaa nalooga soo qaatay hamiga dhaqan ee gobollada kale. Xaqiiqdii, bini-aadamka maanta waa isku dhaf dhaqamo badan oo badankood ay juqraafi ahaan iyo jir ahaanba laga saaray isaga / iyada.
Mid ka mid ah habka saameynta dhaqameed ee noocan ahi waa helitaanka waxyaabaha madaddaalada laga helo adduunka oo dhan. Caalami ahaan, waxaa jira ilo aad u tiro yar oo alaabada riwaayadaha ah oo dhegeysan kara dhagaystayaasha gobollada kala duwan ee adduunka. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa Warshadaha Masraxa Turkiga.
Waa maxay Enif TV
Beddelka Enif TV
YouTube: TRT Ertugrul oo ay qortay PTV
Urdu / Hind Dramas on Android Mobile
Kani waa kanal Channel YouTube ah oo xaruntiisu tahay Dubai waxayna ujeeddadiisu tahay in aan kuu soo bandhigo waxa ugu wanaagsan ee ka kala imanaya warshadaha kala duwan ee adduunka oo dhan. Kanaalkan waxaa loo bilaabay inuu soo saaro qaar ka mid ah cajaladaha fiidiyowga cajiibka ah ee daawadayaasha Hindi iyo Urdu.
Tan waxaa ku jira tarjumaadda qaabab shaqo oo waaweyn oo laga keenay gobollo kala duwan oo loogu talagalay dhagaystayaasha Urdu iyo Hindi.
Waad heli kartaa kuwan wakhti kasta iyo goobkastoo aadan bixin khidmadda rukunka ee kanaalka. Markaa hadaad raadineyso Urdu ama Hindi loo yaqaan Kurulus Osman Episodes ama taageere Urdu / Hindi oo loogu magac daray Ertugrul Ghazi. Waxaad ka daawan kartaa intaas oo dhan qaabka aad dooratay.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan YouTube waa inaad ka dhex gasho waxa ku jira taleefankaaga mobiilka ama isla mar ahaantaana ku xirna telefishankaaga Android oo aad ku daawan karto shaashad weyn qoyskaaga iyo saaxiibbadaa.
Haddii aad ku qaadatid fasaxa usbuuca dhammaadka guriga ama aad ku safraysid inta u dhexeysa shaqada iyo guriga. Waxaad ku xirmi kartaa internetka oo waxaad bilaabi kartaa inaad daawato halka aad ka tagtay markii ugu dambeysay.
Gaar ahaan, haddii aad ka fekereyso bilowga daawashada taxanaha Cusmaan Ghazi Turkish. Kani waa kanalka ay tahay inaad raacdo. Waad heli kartaa dhammaan dhacdooyinka taxanaha ah adiga. Lagu soo qaatay luqadaha Hindi iyo Urdu oo leh dhawaaqa saxda ah, halkan kuma lumi doontid garaacista.
Haddii aad ka yaaban tahay waxyaabaha ku beddeli kara kanaalkaan 'Enif TV YouTube channel'. Kadib akhriska sii wad. Halkan waxaan ku siin doonaa faahfaahinta ilaha kale si aad ugu raaxaysato turkiga iyo waxyaabaha kale ee loogu magac daray Hindi iyo Urdu. Waxaad u adeegsan kartaa taleefankaaga gacanta, laptop, ama kumbuyuutar shakhsi ahaaneed si aad ugu raaxaysato cinwaalladan riwaayadaha ah ee mashquulsan.
Tani waa garabka madadaalada ee Shabakada Telefishanka Pakistan. Idaacada rasmiga ah ee wadanka waxaa lagu xusayaa inay bilaabatay duufaano ciil oo xiliyadan la joogo iyadoo soo bandhigida Diliris Ertugrul dib loogu magac daray Ertugrul Ghazi.
Wuxuu sii daayaa nooca loogu magac daray Urdu ee loogu magac daray 'Hindida daawada' Hindi sidoo kale wuxuu ku raaxeysan karaa dhibaato la'aan.
Hadaadan rabin inaad daawato riwaayadaha telefishanka sabab kasta ha noqotee. Ka dib markaa waxaa jira xulashooyin kale oo lagu sahamin karo sidoo kale. Waxaad aadi kartaa YouTube: TRT Ertugul oo ay qortay PTV.
Kani waa kan rasmiga ah ee loogu talagay soosaarista dhacdooyinka Ertugrul riwaayadaha nooca loo yaqaan. Waad ka bilaabi kartaa dhacdo kasta oo aad istaagto oo aad ka tagto wakhti kasta si aad mar kale u soo noqoto.
Fursadaha kale waxaa iska leh dadka isticmaala mobilada. Hadaad haysatid taleefanka mobilada ee Android markaa waa kuwan kuwa ugu fiican ee lagu beddeli karo Enif TV.
Markaa kadib waad rakibi kartaa dhowr codsi oo toos kuu siinaya inaad toos ugu hesho xargaha macallimiinta Turkiga ee ku qoran luqadaha maxalliga ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Abbasi TV Apk, iFilms App, Iyo Makki TV.
Waxaad sahamin kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan codsiyadan oo waxaad kala soo bixi kartaa faylka APK hal tuubada. Markaa waxaad ku raaxeysan kartaa riwaayadaha Turkiga ee taleefannada Android meelkasta oo aad rabto waqti kasta.
Enif TV waa isugeynta ugu dambeysa ilaha khadka tooska ah ee laga helo halkaad ku raaxeysan karto riwaayadaha iyo waxyaabaha kale ee showbiz laga helo adduunka oo dhan. Halkaan, qeybahan waxaa loogu magac daray Hindi iyo Urdu. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa isku xirka internetka iyo aalad si aad u gasho kanaalka.
Cusmaan Ghazi oo Hindi ah
Cusmaan Ghazi oo ku sugan Urdu
Dramas-ka Turkiga ee Android
Ciyaartoyda Video & Editors (22)
wax soo saarka (20)
Copyright © 2021 RoidHub - Dukaanka Sare ee Qiimeeyay Android Store